Akụkọ - hydroxypropyl methylcellulose na - emerụ ahụ mmadụ? Kedu ihe m kwesịrị ị attentiona ntị?
Hydroxypropyl methylcellulose bụ ihe na-emerụ ahụ mmadụ? Kedu ihe m kwesịrị ị attentiona ntị?
Hydroxypropyl methylcellulose adịghị emerụ ahụ mmadụ, hydroxypropyl methyl cellulose adịghị mma ma ọ nweghị ọgwụ na-egbu egbu, enwere ike iji ya mee ihe dị ka nri, enweghị ọkụ, ọ nweghịkwa mgbakasị ahụ na akpụkpọ ahụ na kọntaktị akpụkpọ ahụ. N'ozuzu na-echere dị ka ihe nchekwa kwa ụbọchị nke 25mg / kg, ọ ga - eyi uwe nchebe ga - eyi n'oge ọrụ.
Womenmụ nwanyị na-enye nwa ara na-a laụ mmiri ka ha na-a theụ ọgwụ ahụ, ọ nweghịkwa ihe ọjọọ ọ bụla a kọrọ na ụmụ ọhụrụ. Yabụ, enweghị ọgwụ mgbochi pụrụ iche maka ụmụ nwanyị dị ime na ndị na-enye nwa ara. Ojiji nke hypromellose n'ime ụmụaka anaghị eme ka mmeghachi omume na-adịghị mma ma e jiri ya tụnyere ndị ọgbọ ọzọ, ya mere ụmụaka nwere ike iji ngwaahịa a na otu atụmatụ dị ka ndị okenye.
Omume nke hydroxypropyl methylcellulose
1. Ọkwa dị elu nke polymerization nke cellulose ether, nke ka ibu ya na-ebu ibu, na viscosity nke ihe ngwọta mmiri.
2. Nke dị elu oriri (ma ọ bụ ịta) nke cellulose ether, ahụ ka viscosity nke ihe mgbaze mmiri a. Agbanyeghị, attentionaa ntị na ịhọrọ nri kwesịrị ekwesị n'oge itinye akwụkwọ iji zere ị intakeụbiga oke nri ma metụta ọrụ nke ngwa agha na ihe. njirimara.
3. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ mmiri, viscosity nke cellulose ether solution ga-ebelata na-amụba okpomọkụ, na elu ịta nke cellulose ether, nke ukwuu mmetụta nke okpomọkụ.
4. Hydroxypropyl methylcellulose ngwọta na-abụkarị pseudoplastic ahụ, nke nwere ihe onwunwe nke ịkwa osisi thinning. Ukwuu shi n'ọkwa na-eme ka ị na -ele, na-ebelata viscosity. Ya mere, nkwekọ nke ngwa agha ga-ebelata n'ihi ike mpụga, nke na-enyere aka ịkpụchasị ngwa ngwa, na-eme ka ngwa agha ahụ nwee ezigbo ọrụ na njikọta.
Ngwunye hydroxypropyl methylcellulose na-egosipụta njirimara mmiri nke Newton mgbe ịta ahụ dị oke ala ma viscosity pere mpe. Mgbe itinye uche gị na-abawanye, ihe a ga-eji nwayọ gosipụta njiri pseudoplastic, yana elu ịta ahụ, ọ ga - apụta ìhè pseudoplasticity.